Glenn Beck - Glenn Beck ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အိုဘားမားခေတ် 2009 ခုနှစ်တွင်ဆဲတယ်အဖြစ်, Glenn Lee က Beck ပင် Limbaugh Rush နှင့်ခေတ်သစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကွန်ဆာဗေးတစ်များအတွက်စကားသံကိုဖြစ်လာ eclipsing, 21 ရာစုရဲ့အရေးအပါဆုံးရှေးရိုးစွဲဝေဖန်သုံးသပ်တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Beck ရဲ့ကျော်ကြားမှုသည်ဒါဝိဒ် Frum ကပြောပါတယ်ရှေးရိုးစွဲအဘယ်အရာကိုစာရေးဆရာ "တစ်ခုစနစ်တကျသည့်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ခုအဖြစ်ရှေးရိုးစွဲများ၏ပြိုကျတဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်တစ်ဦးစိမ်းကားယဉ်ကျေးမှုနည်းမနောအဖြစ်ရှေးရိုးစွဲများ၏မြင့်တက်။ " Beck ရဲ့ကျယ်ပြန့်-အထိသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအထောက်အထားသည်သူ၏တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်မောင်းနှင်နေသည် အဆိုပါလစ်ဘရယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း, acorn, သူ၏အဝေးရောက်လုပ်ငန်း, အဆိုပါ 9/12 စီမံကိန်း၏အောင်မြင်မှုကိုစစ်တိုက်ခြင်း။
ဘ0အစပိုင်း:
Beck တောင်ပေါ်မှာ Vernon, ရေချိုးအတွက်ဘီလ်နှင့်မာရိ Beck မှဖေဖော်ဝါရီလ 10, 1964 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကကက်သလစ်အဖြစ်ကြီးပြင်းရှိရာ။ Beck ရုံ 13 နှစ်အရွယ်အခါ Beck ရဲ့မိခင်တစ်ဦးအရက်, Tacoma အနီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူရေနစ်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်သူသည်မြို့နှစ်ခုရေဒီယို station တဦးအပေါ်တစ်ဦးပြိုင်ပွဲများတွင်လေထုအချိန်တစ်နာရီအနိုင်ရပြီးနောက်ရေဒီယို၌သူ၏စတင်ရရှိခဲ့သည်။ မကြာမီတွင်သူ့မိခင်ရဲ့သေသောနောက်, မိမိညီအစ်ကိုတို့-In-ပညတ်တရား၏တဦးတည်း Wyoming အတွက်သတ်သေနှင့်အခြားတစ်ဦးဆိုးဝါးနှလုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။ ဘီလ် Beck တစ်စားတော်ဝန်, သူ့သား Sehome High School တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ Bellingham မှမြောက်ဘက်သူ့မိသားစုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရပြီးနောက် 1980 နှစ်များအစောပိုင်းတွင်, Beck ဝါရှင်တန်ထံမှ Salt Lake City, Utah မှပြောင်းရွှေ့ဟောင်းတစ်ဦး Mormonism သာသနာပြုတစ်ဦးတိုက်ခန်း shared ။ K-96 မှာခြောက်လ Provo အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နောက်ပိုင်းတွင် Baltimore, Houston Phoenix မြို့, ဝါရှင်တန်နှင့် Connecticut တွင်ဘူတာမှာ။ 26 မှာသူကလေးနှစ်လက်ထပ်ခဲ့သည်နှင့်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူသူသမီးနှစ်ယောက်, မာရိ (ဦးနှောက်သွက်ချာသူ) နှင့်ဟန္နခဲ့တော်မူသောရန်သူ၏ပထမဇနီး, လက်ထပ်။
မိမိအအစောပိုင်းအောင်မြင်မှုနေသော်လည်း, သို့သော်, Beck မကြာမီသူ၏မိခင်သေဆုံးအပြုအမူအလွဲသုံးစားလုပ်အတူတူပင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမလွန်ဆန်နိုင်။ သူသည် 1990 ခုနှစ်၌သူ၏အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ကွာရှင်းခဲ့သည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တိုက်စဉ်အတွင်း Beck တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကနေထောက်ခံချက်တစ်ခုဘာသာရေးအဓိကကျေးဇူးတင်စကားအဖြစ်ယေးလ်မှလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့
ဂျိုး Lieberman ။ Beck သို့သော်သူ၏သမီး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, လက်ရှိကွာရှင်းတရားစွဲဆိုမှုနှင့်သူ၏အစဉ်အဆက်-depleting ဘဏ္ဍာရေးအားဖြင့်အာရုံရုံတစျခုစာသင်, ကြာခဲ့သည်။ သူယေးလ်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်သူ့မိသားစုကသူ့ကိုအရက်အမည်မသိနှငျ့အတူသူ့ကို acquainting အားဖြင့်သမ္မာသတိရှိကြလော့ get ကူညီပေးခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူ၏ဘဝတစ်ဝှမ်းလှည့်လာတယ်။ သူကသူ့အနာဂတ်ဒုတိယဇနီး, Tania တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလျက်, များအတွက်လိုအပ်ချက်အဖြစ် လက်ထပ်ထိမ်းမြား သူသည်အဆုံးစွန်သောနေ့သူတော်စင်များ၏ဘုရားကျောင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Beck ဤအချိန်ကာလအတွင်းရေဒီယိုစကားပြောပြန်ရောက်လာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်လွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒအမြင်များနှင့်မိသားစုတန်ဖိုးများအားကြီးသောသဘောမျိုးနဲ့ Mormonism ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ထုတ်တစ်ရှေးရိုးစွဲအင်အားစုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။ သူသည်အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စများ (သူဟောလိဝုဒ် Liberation ၏ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ဖြစ်ပါသည်, အီရတ်စစ်ပွဲ၏အထောက်အပံ့များအပေါ်သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြဘို့အာရုံကိုရေးဆွဲတီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်အပေါ်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်, နိုင်ငံရေးမှန်ကန်မှု, euthanasia, Anti-ဆေးလိပ်သောက်စည်းမျဉ်းများနှင့်အပေးခြင်းလိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သူဖြစ်ပါသည် ထို့အပြင်) လိုလားသူအသက်, နှစ်ပေါင်းများစွာရီပတ်ဘလီကန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတစ်ဦးလင်းလင်းထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသား Spotlight ကို:
Beck အလွန်လျင်မြန်စွာအမျိုးသားရေးကြယ်ပွင့်မှဒေသခံတစ်ဦးကရေဒီယိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကနေသွား၏။ အဆိုပါ "Glenn Beck အစီအစဉ်" Tampa, ဖလော်ရီဒါတစ်ဘူတာရုံမှာ 2000 ခုနှစ်စတင်များနှင့်ဇန်နဝါရီ 2002 အသုံးပြုပုံ Premiere ရေဒီယိုကွန်ယက်များ 47 ဘူတာအပေါ်ပြပွဲစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပြပွဲပြီးရင်နိုင်ငံတကာက 100 ကျော်ဘူတာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်မှာ Philadelphia တွင်, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Beck ကနဦး San Antonio တွင်, Cleveland, အတ္တလန်တာ, ချိုင့် Forge ရဲ့နှင့် Tampa ပါဝင်သည်ပေးသောအမေရိကတစ်လွှားဆန္ဒပြပွဲများ, စည်းရုံးရေး, ရှေးရိုးစွဲလှုပ်ရှားမှု့များအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်သူ၏ပြပွဲကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ 2003 ခုနှစ်တွင်သူသည်အီရတ်နှင့်အတူစစ်တိုက်သွားနိုင်ဖို့ဂျော့ခ်ျဒဗလျူဘုရ်ှရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၏ထောက်ခံမှုအန်တုခဲ့ကြပါတယ်။
2006 ခုနှစ်တွင် Beck က CNN ရဲ့ခေါင်းကြီးသတင်းများ Channel ကိုအပေါ်တစ်ဦးချုပ်အချိန်သတင်းဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပြပွဲ, Glenn Beck ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြပွဲတစ်ခုလက်ငင်းထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်နှစ်သူ ABC ရုပ်သံရဲ့ကောင်းနံနက်အမေရိကတိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာအောင်ခဲ့သည်။ Beck ဇူလိုင်လ 2008 ခုနှစ်မှာလည်းဧည့်သည်-တည်ခင်းဧည်လာရီဘုရင်ကတိုက်ရိုက်ဤအချိန်အားဖြင့်, Beck နန်စီကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနောက်ကွယ်မှ, CNN မှာအောက်ပါဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ 2008 ခုနှစ်တွင် Beck သည့် Fox News Channel ကိုဖျားယောင်းခဲ့သည်။ မိမိအပြပွဲ, Glenn Beck သမ္မတဘရက်ခ်အိုဘားမားမီညဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် network ပေါ်မှာပြသဖို့။
သူလည်းခေါ်လူကြိုက်များ O'Reilly Factor အပေါ်တစ်ဦးအစိတ်အပိုင်း, ရှိခဲ့ပါတယ် "သင်၏ Beck & ခေါ်ဆိုမှုမှာ။ "
Advocacy, တက်ကြွလှုပ်ရှား & အဆိုပါ 9/12 Project မှ:
2003 ခုနှစ်မှစ. Beck သူဟာသနှင့်ကူးစက်ရောဂါစွမ်းအင်သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူ၏တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးသောဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကိုပြောပြထားတဲ့အတွက်တဦးတည်းလူပြပွဲများတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောအမျိုးသားတို့ကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်သိရသည်။ တစ်ဦးရှေးရိုးစွဲပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အမေရိကန်မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူများအဖြစ်, Beck အီရတ်မှတပ်ဖြန့်တပ်ဖွဲ့များအဘို့အစုဝေးပွဲကိုတစ်စီးရီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Beck ရဲ့အကြီးမားဆုံးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုစီမံကိန်းတွင်သို့သော်အဆိုပါသူမတ်လ 2009 ခုနှစ်အဆိုပါစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ရာအဆိုပါ 9/12 Project မှစက်တင်ဘာ 11 ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများတွင်အောက်ပါကျထကျ၌အမရေိစည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်းကိုးအခြေခံမူများနှင့်တကျိပ်နှစ်ပါးသောတန်ဖိုးများကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံဖြစ်ပါတယ် 2001 9/12 စီမံကိန်းကိုလည်းအသစ်သောလက်ဝဲအတူတက်တိုက်ကျွေးအများအပြားကွန်ဆာဗေးတစ်တစ်စုဝေးရာအျောဟစျသံဖြစ်လာသည်။
2008 ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်စွပ်စွဲချက် (acorn) ယခုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက်လစ်ဘရယ်, အတွင်းစိတ်-မြို့အသိုင်းအဝိုင်းကအရေးယူမှုအုပ်စုတစ်စုအဝန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အစည်းအရုံးကြောင်းပေါ်ထွက်ထက်ပိုမို 10 ပြည်နယ်များအတွင်းရှိမဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်လိမ်လည်မှုမြောက်မြားစွာဖြစ်ရပ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ FOX သတင်းပူးပေါင်းပြီးနောက် Beck အဖွဲ့အစည်းလူနည်းစုများနှင့်ဝင်ငွေနည်းငွေချေးဖို့ချေးငွေများစေရန်ဘဏ်များအပေါ်ဖိအားလျှောက်ထားခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့က၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုအစွန်းရောက်ဘို့ရှောလုသည် Alinsky ရဲ့ "စည်းကမ်းများလျှောက်ထားပုံကိုထုတ်ဖော်သည့်လစ်ဘရယ်ထောက်ခံအားပေးမှုအုပ်စုတစ်စုမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်တာအစီရင်ခံစာများဆက်တိုက်ပြုပါစတင်ခဲ့သည် ။ " Beck အဖွဲ့အစည်းရဲ့လစ်ဘရယ်အစီအစဉ်ကိုတိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
Beck & သမ္မတ Barack Obama:
သမ္မတအိုဘားမားဇန်နဝါရီ 2009 ခုနှစ်ကရုံးထံသို့ လာ. ကတည်းကတိုင်းပြည်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်ဦးတည်ချက်တွေနဲ့မပျော်အများအပြားကွန်ဆာဗေးတစ်အဘို့, Glenn Beck အတိုက်အခံ၏စကားသံဖြစ်လာသည်။
သူကနောက်ကွယ်ကတွန်းအားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်, Beck tacitly အတည်ပြုခြင်းနှင့် vociferously အိုဘားမားအစိုးရမှတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်အတွက်တီထွင်သောအမျိုးသားရေးလက်ဖက်ရည်ပါတီလှုပ်ရှားမှု၏ပေါ်ပေါက်ရေးထောက်ခံခဲ့သည်။ Beck ရဲ့အခိုင်အမာအမြဲအငြင်းပွားဖွယ်နေမြဲနေစဉ် - သူသမ္မတအိုဘားမား၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအထုပ်ကိုကျွန်ခံနေရာများအတွက်လျော်ကြေးငွေရယူဖို့တစ်လမ်းကြောင်းဥပမာ, ပြောကြားခဲ့သည် - သူအချိန်ကြာမြင့်စွာကွန်ဆာဗေးတစ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အင်အားဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
အဆိုပါ 2016 ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း Beck တစ်ထောက်ခံသူခဲ့ အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Cruz (R-TX) နှင့်မကြာခဏယျတျောနှငျ့အတူမဲဆွယ်။
2020 ခုနှစ်သမ္မတအဘို့အ Rand ရှင်ပေါလုများအတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်
ပေးစာရောက်ပြီး - Dyslexia နှင့်အတူကျောင်းသားများများအတွက်တစ်ဦးကသင်ခန်းစာအစီအစဉ်
အဆိုပါ Heathland သင်တန်းအမှတ်စဥ်: တစ်ဦးကဂေါက်သီးပထဝီသင်ခန်းစာ
ဒန် Quayle Quotes
အဆိုပါ Clarinet ၏သမိုင်းအကျဉ်း
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Franklin အတ္ထုပ္ပတ္တိ
စပိန်ကြိယာ '' Tratar '' အသုံးပြုခြင်း
သင့်ရဲ့ Corvette ဟာကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလား?
သင်၏အဆိုသံ Range Find လုပ်နည်း
Intelligent ဒီဇိုင်းပြည်သူ့ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏အပိုင်း Be သငျ့သလော
ဂျူနီယာ, မာတင်လူသာကင်းတို့ကမိန့်ခွန်း '' ကျွန်မအိပ်မက်ဖူး '' အပေါ်ဝေါဟာရပဟေဠိ
ပမာဏ၏ adjective နာမဝိသေသန
ချားလ်စ် Hamilton ကဟူစတန်: Civil Rights ရှေ့နေချုပ်နှင့်ဆရာ
နှုတ်ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်: အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်ဥပမာများ
သင့်ရဲ့ Universal ပူးတွဲ (U-ပူးတွဲ) အစားထိုးရန်အတွက်မည်သို့
ကောငျးကငျတ Barachiel, မင်္ဂလာသက်၏အိန်ဂျယ်တွေ့ဆုံရန်